Mako 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 7:1-37
Tsika dzevanhu dzinofumurwa (1-13)
Zvinosvibisa munhu zvinobva mumwoyo (14-23)
Kutenda kwemukadzi wechiSirofenikiya (24-30)
Murume matsi anoporeswa (31-37)
7 VaFarisi nevamwe vanyori vakanga vabva kuJerusarema vakamuunganira.+ 2 Uye vakaona vamwe vadzidzi vake vachidya zvekudya zvavo nemaoko akasviba, kureva kuti, asina kugezwa. 3 (Nekuti vaFarisi nevamwe vaJudha vese havadyi vasina kugeza maoko kusvikira mumagokora, vachitevedzera tsika dzevanhu vekare, 4 uye pavanobva kumusika, havadyi vasina kugeza. Vane dzimwe tsika dzakawanda dzavakagamuchira uye dzavanotevedzera, dzakadai sekubhabhatidza makapu, majagi, nemidziyo yemhangura.)+ 5 Saka vaFarisi ava nevanyori vakamubvunza kuti: “Sei vadzidzi vako vasingatevedzeri tsika dzevanhu vekare, vachidya nemaoko akasviba?”+ 6 Iye akati kwavari: “Regai Isaya akazoprofita nezvenyu imi vanyengeri, sekunyorwa kwazvakaitwa kuti, ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure chaizvo neni.+ 7 Vanoramba vachindinamata pasina, nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’+ 8 Munosiya murayiro waMwari muchibatisisa tsika dzevanhu.”+ 9 Uyezve, akati kwavari: “Munoruka mazano ekuti musiye murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu.+ 10 Semuenzaniso, Mozisi akati, ‘Kudza baba vako naamai vako,’+ uye akati, ‘Munhu anotuka baba vake kana amai vake anofanira kuurayiwa.’+ 11 Asi imi munoti, ‘Kana munhu akati kuna baba vake kana amai vake: “Chese chandiinacho chandaigona kukubatsirai nacho ikobhani (kureva, chipo chakatsaurirwa kuna Mwari),”’ 12 hamuzomubvumiri kuitira baba vake kana amai vake kunyange chinhu chimwe chete.+ 13 Saka munoita kuti shoko raMwari rishaye simba netsika dzenyu dzamakapfuudza kune vamwe.+ Uye munoita zvinhu zvakawanda zvakadai.”+ 14 Saka akashevedza vanhu, akati kwavari: “Nditeererei mese, munzwisise zvandiri kureva.+ 15 Hapana chinhu chinobva kunze kwemunhu chinopinda maari chinogona kumusvibisa; asi zvinhu zvinobuda mumunhu ndizvo zvinomusvibisa.”+ 16 * —— 17 Paakanga abva pane vanhu vakawanda, apinda mumba, vadzidzi vake vakatanga kumubvunza nezvemufananidzo wacho.+ 18 Saka akati kwavari: “Ko nemiwo hamunzwisisi here? Hamuzivi here kuti hapana chinhu chinobva kunze chinopinda mumunhu chinogona kumusvibisa, 19 sezvo chichipinda mudumbu make, kwete mumwoyo make, chobuda chichipinda mugomba retsvina?” Saka akaratidza kuti zvekudya zvese zvakachena. 20 Uyezve akati: “Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinomusvibisa.+ 21 Nekuti mukati memunhu, mumwoyo make,+ munobuda kufunga kwakaipa: unzenza,* umbavha, umhondi, 22 upombwe, makaro, mabasa akaipa, unyengeri, tsika dzakafumuka,* ziso rine shanje, kumhura, kuzvikudza, uye upenzi. 23 Zvinhu zvese izvi zvakaipa zvinobuda mukati memunhu uye zvinomusvibisa.” 24 Akabva ipapo, akaenda munharaunda yeTire neSidhoni.+ Ava ikoko akapinda mune imwe imba asingadi kuti zvizivikanwe, asi vanhu vakazviziva. 25 Mumwe mukadzi akanga aine mwanasikana mudiki akanga aine mweya usina kuchena, paakanzwa nezvake akabva angouya, akagwadama patsoka dzake.+ 26 Mukadzi wacho akanga ari muGiriki, ari chizvarwa chechiSirofenikiya; uye akaramba achimukumbira kuti adzinge dhimoni raiva pamwanasikana wake. 27 Asi akati kwaari: “Rega vana vatange vaguta, nekuti hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochikandira mbwanana.”+ 28 Asi iye akapindura achiti: “Ndizvozvo ishe, asi mbwanana dziri pasi petafura dzinodyawo mafufu evana.” 29 Iye akabva ati kwaari: “Nekuti wataura izvi, chienda; dhimoni racho rabuda mumwanasikana wako.”+ 30 Saka akaenda kumba, akawana mwana wacho akarara pamubhedha, uye dhimoni racho rabuda.+ 31 Jesu paakadzoka achibva kunharaunda yeTire, akapfuura nemuSidhoni achienda kuGungwa reGarireya, achipfuura nemunharaunda yeDhekaporisi.*+ 32 Vakabva vauya kwaari nemurume akanga ari matsi,+ asingagoni kunyatsotaura, vakamuteterera kuti aise ruoko rwake paari. 33 Uye akaenda naye kwake ega, kusina vanhu. Akabva aisa zvigunwe zvake munzeve dzemurume wacho, uye akasvipa mate, akabata rurimi rwake.+ 34 Uye akatarisa kudenga, ndokutura befu, akati kwaari: “Efufata,” zvinoreva kuti, “Vhurika.” 35 Saka nzeve dzake dzakavhurika,+ uye dambudziko rake rekutaura rakabviswa, akatanga kutaura zvakanaka. 36 Akabva avaudza kuti vasaudza vanhu,+ asi paairamba achivaudza, ivo vaitowedzera kutaura nezvazvo.+ 37 Chokwadi vakashamiswa chaizvo,+ uye vakati: “Aita zvinhu zvese nemazvo. Anoita kuti kunyange matsi dzinzwe uye vasingatauri vataure.”+
^ Kana kuti “upombwe.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “Nharaunda Yemaguta Gumi.”